पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्दै, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य – HostKhabar ::
पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्दै, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य
काठमाडौँ : दर्शनार्थीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पशुपतिनाथ मन्दिर खुला गर्ने तयारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको छ । कोरोनाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै खुल्ने भएको हो ।
दर्शनार्थीहरुले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ । दुई दुई मिटरको भौतिक दुरी कायम गर्दै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा दर्शनका लागि खोलिने सम्पूर्ण ढोकाहरु खुला नभएपनि पश्चिमद्वार हुँदै भुवनेश्वरीबाट प्रवेश गराउने तयारी भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले बताए ।
मन्दिरभित्र प्रवेश गरेपछि पुरै परिक्रममा गर्न भने पाइने छैन । मुल ढोकाबाट नै दर्शन गरी फर्किनुपर्ने उनले बताए । कार्यकारी निर्देशक डा. खतिवडाले सरकारले निर्देशन दिएको दोस्रो दिनपछि नै पशुपतिनाथ मन्दिर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए ।
दर्शनार्थीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै मन्दिर खुला भएपनि विशेष पूजाको व्यवस्था भने नगरिने भएको छ । भण्डारी र भट्टहरुलाई संक्रमणको जोखिम बढी भएकाले तत्काल विशेष पूजाको व्यवस्था नहुने उनले बताए ।
अहिले नित्यपूजा नरोकिए पनि विशेष पूजा र दर्शन गर्न भने रोक लगाइएको छ । सरकारले अन्य सेवा क्षेत्र खुला गरेसँगै धार्मिक स्थलहरु पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै केहीदिन अघि पशुपति क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको थियो ।
यसरी मनाइँदैै छ सुर्खेतमा महाशिवरात्रि पर्व ! ( हेर्नुस् भिडियो)
आज महाशिवरात्रि पर्व, आजको दिन कस्तो छ, हेर्नुहोस् राशिफल
पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रिको तयारी
बृहस्पति अस्त आज आइतबारबाट सुरु हुँदै : यो वर्षभर धार्मिक कार्य गर्न नहुने
प्रशिद्ध शीव मन्दिर लाटिकोइलीमा अर्धनारेश्वरको मुर्ति स्थापना
आजबाट जितिया पर्व सुरू